Networks SBS - Myanmar Asian TV
မြန်မာစာတမ်းထိုးဇာတ်ကားများ မပြတ်တမ်းကြည့်ရှုရန် Myanmar Asian TV Page လေးကို Like နှိပ်ပြီး See First လုပ်ထားနော်...
Search results for "SBS"
Iljimae ( 2008 )
အီဂျီမဲ လို့ လူသိများပြီး ပန်းချယ်​ရီကလဲ့စား နာမည်ဖြင့် ကိုတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက မြဝတီ မှာ လွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ် … အီဂျီမဲ လို့ဆိုလိုက်​ရင်​​တော့ Korean Drama Crazy ​တွေအတွက်​ သိပ်​စိမ်းမယ်​မထင်​ပါဘူး … ဒါ​ပေမဲ့လဲ မကြည့်​ရ​သေးတဲ့သူ​တွေအတွက်​​ရော ထွက်​ထားတာကြာပြီမို့လို့ ပြန်​ကြည့်​ချင်​တယ်​ဆိုတဲ့သူ​တွေအတွက်​​ရော နန်းတွင်းကားကို ​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးကြည့်​ချင်​တယ်​ဆိုတဲ့သူ​တွေအတွက်​​ရော ဒီဇာတ်​ကား​လေးကို မိတ်​ဆက်​​ပေးချင်​ပါတယ်​ … အီဂျီမဲ ဆိုတာက​တော့…
My Strange Hero ( 2018 )
Another Title – Revenge is Back မနေ့ညက အသစ်ထွက်ရှိလို့လာခဲ့ Ongoing KDrama လေးပါ … Romance, Comedy ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပြီး 35 mins ကြာ အပိုင်း 32 ပိုင်းဖြင့် SBS ရုပ်သံဌာနမှ ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် … Main Cast အနေဖြင့် Ruler:…
Hymn of Death ( 2018 )
Nov 27th မှာ SBS က ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိတဲ့ Lee Jong suk ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ် ” Hymn Of Death “ 1920 ခုနှစ် က ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ first soprano အဆိုတော်လေး ယွန်းရှင်းဒေါ့ နဲ့ တေးရေးဆရာ ကင်ဝူဂျင်း တို့ ရဲ့…
The Last Empress ( 2018 )
မနေ့ညကတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း မနေ့ကထိထွက်ထားသမျှအပိုင်းအားလုံးတင်ပေးလိုက်ပြီနော် ကဲကဲ…Downပြီးအားပေးရမှာ MMATV Fansတွေရဲ့တာဝန်နော် 😅😅😅 အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသာပတေးနေ့ SBS ရုပ်သံလိုင်းတွင်ပြသလျှက်ရှိသောOngoing ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ် တပတ်တွင် ၄ပိုင်းပြသလျက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ၄၈ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ သက်ဦးဆံပိုင်ခေါင်းဆောင်သည့်အစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလ အိုဆွန်းနီဟာ ထက်မြက်ပြီးကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိတဲ့ တေးသရုပ်ဖော် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက် မင်းကြီးလီဟော့နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရတယ် မချစ်ပဲနဲ့သူရဲ့ပြစ်မှူကိုဖုံးကွယ်ချင်လို့…
Where Stars Land ( 2018 )
2018ထွက် Ongoingလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Where Stars Landတဲ့ 😉😉😉 အဓိကမင်းသားကတော့လီဆူယွန်းအဖြစ် Tomorrow with you/Signal ထဲကမင်းသား Lee Je Hoonဖြစ်ပါတယ် လီဆူယွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့ လေယာဉ်ခရီသည်ဝန်ဆောင်ရေးဌာနမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲနေတတ်သူ သူမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားကိုလျိုဝှက်ပြီးသာမာန်ဘဝနဲ့နေထိုင်ချင်သူတစ်ယောက် အဓိကမင်းသမီးလေးကတော့ဟန်ယောရွန်းအဖြစ်မင်းသမီးလေးကတော့ မိတ်ဆက်စရာမလိုအောင်မကြာခင်ကမှပြီးသွားတဲ့’Robot’ဇာတ်ကားထဲကrobotမလေး Chae Soo Bin ဖြစ်ပါတယ် ဟန်ယောရွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့သူလုပ်ချင်တဲ့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရရှိထားသူ စိတ်အားထက်သန်ပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားပေမယ့်အမြဲပြဿနာရှာတတ်သူ လုပ်ငန်းခွင်ကိုဆူညံအောင်လုပ်နိုုင်စွမ်းရှိသူ လို့လေဆိပ်ဌာနမှာနာမည်ကြီးသူ…
Puck! ( 2016 )
ပျိုမေလေးတို့ရဲ့ အသဲစွဲ Asia Prince လို့ တင်စားခြင်းခံရတဲ့ Lee Kwang Soo ရဲ့ 2016 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Web Drama လေးပါ … အပိုင်းရေ ၂ ပိုင်းပဲ ပါဝင်တာတော့ ဇာတ်လမ်းအရှည်ကြီးတွေ သဘောမကျတတ်တဲ့ သူများအတွက်လဲ အဆင်ပြေစေမှာပါ … ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်း ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် – ဂျိုမန်​…
Let Me Introduce Her ( 2018 )
Dramaလေးအကြောင်း မပြောခင် ဒီကားလေးကို ဘာသာပြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း အရမ်းကို သဘောတကျဖြစ်မိလို့ ဝါသနာတူတွေ ကြည့်ရအောင် ပြန်ပေးဖြစ်တာပါ….. ဒီdramaလေးကို SBS ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသတာဖြစ်ပြီး စနေညတိုင်း မိနစ်( ၃၀)စာ အပိုင်း (၄)ပိုင်း ဆက်တိုက် ပြသတာဖြစ်ပါတယ်….. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…….. မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး (ရှင်းဟွန်းဆော သို့မဟုတ် ဂျီအွန်းဟန်) တစ်ယောက်ဟာ…
Temptation ( 2014 )
ကားဟောင်းလေးတွေထဲကမှMain leads တွေအနေနှင့်- (Kwon Sang-woo & Choi Ji-woo)တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Temptation ဆိုတဲ့ 2014ထွက် seriesလေးပါ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ရင်နှီးပီးသားဖြစ်တဲ့ Stairway to Heaven(2003)”အချစ်လှေခါးထစ်” ဇာတ်လမ်းထဲကစုံတွဲလေးအတူတူပြန်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ… Kwon Sang-woo (ချာဆုတ်ဟွန်) Choi Ji-woo (ယူစီရွန်း) Lee Jung-jin (ကန်မင်ဝူး) Park Ha-sun (နာဟုန်ဂျူ)တို့အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ကြမှာပါ…
Shining Inheritance ( 2009 )
Also known as Brilliant Legency SBSရုပ်သံလိုင်းကနေ2009ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားပြီး ပရိတ်သတ်အချစ်တော် Lee Seung Gi…. Doung Yi,49 days,secret loveတွေထဲမှာပါဝ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Bae Soo Bin….. W-two worldsထဲ မင်းသမီး Han Hoo Joo….. The Innocent Man,The princess man,Good doctor,Goodbye Mr…
You Are All Surrounded ( 2014 )
ဒီဇာတ်ကားလေးအခု Channel 7မှာလွတ်လမ်းဆိုတဲ့နာမည်နှင့်ပြသလျက်ရှိတဲ့ကားလေးပါ TVကလွှင့်တာကိုမကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းကြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော် Review******** ၂၀၁၄ကထွက်ခဲ့တဲ့စုံထောက်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့မင်းသား Lee Seung-Giနဲ့မင်းသမီး Go Ara(Blackမင်းသမီး)တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် အွန်ဒယ်ဂူ,အော်ဆူဆွန်း,ပါ့ခ်ထယ်အီ,ဂျီဂု ဆိုတဲ့စုံထောက်အသစ်လေးယောက် သူတို့လေးယောက်ကို P4ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့၎ယောက်ကအလုပ်အပေါ်သိပ်ပြီးတက်ကြွစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူး ??? အဲ့လိုနဲ့သူတို့အသစ်၎ယောက်ဟာရာဇဝတ်မှုအဖြစ်များတဲ့ ဂန်နမ်းစခန်းမှာတာဝန်ကျတဲ့အခါမှာတော့…. သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဆိုပန်ဆော့နှင့်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့…… အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူတို့ လေးယောက်အပေါ်အားမရမှုတွေ သူတို့လေးယောက်ရဲ့အလွဲတွေကိုဟာသနှောပြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်အွန်ဒယ်ဂူကကောသူ့ဘဝအမှန်ကိုဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ? သူနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြားကဆက်နွယ်မှုကဘယ်လိုလဲ? ဆိုတာကတော့……. စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Action,comedy,romance အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲရသစုံအောင်ခံစားရမှာပါ …
DMCA / Disclaimer Policy
Presented with ❤️ by MMATV Team
Myanmar Asian TV